CNC umzila, Laser Machine, jinga Knife umsiki - AccTek
AccTek mini steel sheet ukusika cnc metal machine plasma AKP1010
2000w ifayibha laser kumbhobho ukusika Umatshini AKJ1530F2 nge rotary
3d cnc umatshini nokukrola ATC iinkuni kumzila AKM1530C
Njengomvelisi phambili CNC umzila kunye noomatshini Laser., Sizibophelele ekubeni phambili kobugcisa ezintsha gqolo ukuphucula zonke iinkalo zeshishini lethu. Isicwangciso sethu isinceda bafumane ngamandla kwimarike yamazwe ngamazwe yaye iqinisekisa yokukhula kwexesha elide.
Speed ​​High Cnc Plasma Metal Sheet Cutting kaMaki ...
Quality High Ilaphu Leather Cnc jinga Kni ...
3mm Stainless 1000W Tube oqeqeshiwe Pipe ...
CNC Textile Ilaphu amalaphu Toys Ekhaya denim Dress ...
commisioned kude umhla
D & B kwiSatifikethi
A umenzi kobungcali CNC umzila kanye laser OOMATSHINI
Thina sizimisele ukunika iindleko izisombululo kunye neemveliso ezisemgangathweni kunye sotshintsho ngokukhawuleza kakhulu. Thina enye bambalwa abayiqondayo iimfuno umgangatho kunye nokunikezelwa nabathengi bethu zasekhaya nezamazwe ngamazwe. Zonke kunomatshini ukugcinwa yokwakha silindele engqondweni abathengi '.
Nceda kwabelwane ngezimvo zakho kunye nathi yaye siza kwenza iingcinga zakho umatshini ukusebenza.
baza kuvavanywa yonke machines 24hours ngentla phambi kokuba zithunyelwe ukuqinisekisa ukuba imisebenzi yalo ngokufanelekileyo. Le iparameters saseka le program iya kuba yogcino.
Thina nikeza FOB, CIF kunye ucango ukuba izinto ziyhunyelwe ngendlu choosing.All wakho oomatshini ziya zipakishwe kakuhle kwityala ngamaplanga ukuqinisekisa ukuba ifika zikwimeko elungileyo.
EMVA SERVICE ZOKUTHENGISWA
Sinento iqela inkonzo inamalungu 8 ngubani na ukuthetha IsiNgesi, ngokuba nayiphi na imibuzo baya kuphendula intanethi. Ukuba kuyimfuneko, sinako ukuthumela ezintanjeni ukuba indawo wakho ufakelo noqeqesho.
Machine Laser kukhunjulwe, ATC Cnc umzila ngentlabo Machine , Best Laser kukhunjulwe Machine, CO2 Laser ngentlabo Machine , CO2 Laser Cutting ngentlabo Machine , 300w 500w Laser Cutting Machine Ifayibha,